Soojiidashada Cusub ee Madaarka Frankfurt: Xarunta Booqashada Fraport wuxuu furmayaa 2da Ogosto
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Soojiidashada Cusub ee Madaarka Frankfurt: Xarunta Booqashada Fraport wuxuu furmayaa 2da Ogosto
Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • dhaqanka • Jarmalka Jebinta Wararka • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
“Globe” waa bandhigga ugu farsamada badan ee Xarunta Booqdaha. Darbigaan LCD -ka ee is -dhexgalka leh wuxuu u muuqdaa dhammaan duulimaadyada firfircoon ee adduunka oo dhan waqtiga dhabta ah.
Soojiidasho cusub ayaa ka furmaysa 2da Ogosto garoonka diyaaradaha ee Frankfurt: xarunta booqashada Fraport Fraport ee ku taal Terminal 1, Hall C, waxay soo dhaweyn doontaa martideeda ugu horreysa waqtiga safarka xagaaga.
Bandhigyadeeda ballaadhan ee ballaadhan waxay u oggolaanaysaa booqdayaasha da 'kasta leh inay la kulmaan adduunka xiisaha leh ee duulista hawada.
Qiyaastii 30 bandhigyo hal -abuurnimo iyo is -dhexgal ah ayaa fursad u siinaya inay la kulmaan xarunta duulista hawada ee ugu weyn Jarmalka qaab cusub.
On 1,200 mitir oo laba jibbaaran oo dhul ah, bandhigyadu waxay soo bandhigayaan muuqaal xiiso leh oo ka dambeeya muuqaalka Madaarka Frankfurt iyo guud ahaan duulimaadyada.
Soo-booqdayaashu ma bartaan oo keliya wax ku saabsan hawl-maalmeedka madaarka; sidoo kale waxay fursad u haystaan ​​inay dib u eegaan taariikhdeeda, ogaadaan farsamooyinka duulimaadka, iyo inay tixgeliyaan mustaqbalka duulimaadka.
Bandhigyadu waxay ku martiqaadaan martida inay is dhexgalaan oo ay naftooda quusaan. Hal ciyaar, booqdayaashu waxay tijaabiyeen xirfadahooda marshadaynta iyagoo ku hagaya Airbus A320neo meesha ay dhigtaan. Iftiimin dheeraad ah ayaa ah raacitaan dhab ah oo dhab ah iyada oo loo marayo nidaamka maareynta alaabta garoonka. Maamulaha Fraport Dr. Stefan Schulte ayaa yiri: “Xaruntayada Booqashada ee warbaahinteedu badan tahay waxay dadka u oggolaanaysaa inay si fiican u fahmaan oo ay waayo-aragnimo ugu yeeshaan dunida gegida dayuuradaha ee kala duwan oo aad u adag. Soo jiidashada cusub ayaa sidoo kale fure u noqon doonta xoojinta wada-hadalka muddada dheer lala yeelanayo bulshadayada maxalliga ah iyo martida ka socota qaybaha kale ee Jarmalka iyo adduunka. ”
“Globe” waa bandhigga ugu farsamada badan ee Xarunta Booqdaha. Darbigaan LCD -ka ee is -dhexgalka leh wuxuu u muuqdaa dhammaan duulimaadyada firfircoon ee adduunka oo dhan waqtiga dhabta ah. Waxay ka kooban tahay 28 bandhig shaqsi, oo la isku daray si loo abuuro hal shaashad oo dhererkeedu gaarayo 25 mitir oo laba jibbaaran. Nidaamku runtii waa mid gaar ah: ma jirto meel kale oo awood u leh inay si faahfaahsan u muujiso kumanaan dhaqdhaqaaq duulimaad ah. Xogta duulimaadka ee The Globe waxaa bixiya FlightAware, oo ah madal dabagalka duulimaadka Mareykanka. La -hawlgalayaasha Fraport waxay la shaqeeyaan FlightAware si ay uga baaraandegaan xogta looga baahan yahay hawlgallada madaarka Frankfurt. Gaar ahaan, xogta ay bixisay FlightAware waxay oggolaanaysaa qorshayn wanaagsan oo ku saabsan hababka madaarka.
Qaab 55-mitir oo laba jibbaaran ah oo ah Madaarka Magaalada (qiyaas ahaan 1: 750) ayaa ku martiqaadaya martida inay bilaabaan socdaal muuqaal ah oo daahfurka ah.
Xarunta Booqashada Fraport waxaa la dhammeeyay dayrtii 2020, ka dib laba sano oo dhisme ah, oo ay ku kacday qiyaastii 5.7 milyan oo yuuro. “Waa inaan dib u dhigno furitaankiisa dhowr jeer cudurka faafa awgiis. Sidaa darteed aad ayaan ugu faraxsanahay inaan hadda daaha ka rogo soo -jiidashadayada cusub ee soo -dhoweynta ee Madaarka Frankfurt. Xaruntu waxay iftiiminaysaa dunida xiisaha leh ee nolosha madaarka, ”ayay sharraxday Anke Giesen, oo xubin ka ah guddiga fulinta Fraport iyo Agaasimaha Fulinta ee Dukaan -iibinta iyo Hantida Ma guurtada ah.
Tikidhada xarunta waa in horay looga sii iibsadaa internetka www.fra-tours.com/en . Xaqiijinta ballansashada ayaa loo baahan yahay si loo helo oggolaansho. Waqtigan xaadirka ah, tigidhada laguma heli karo madaarka laftiisa.
Xarunta Booqashada Fraport waxay furan tahay maalin walba laga bilaabo 11 subaxnimo ilaa 7da fiidnimo. Qiimaha caadiga ah ee gelitaanka dadka waaweyn waa 12 euro. Qiimo jaban oo ah 10 euro ayaa diyaar u ah martida u qalanta ee leh aqoonsi u dhigma. Carruurta da'doodu ka yar tahay afar sano waxay ku soo galaan lacag la'aan. Inta lagu jiro fasaxa dugsiga gobolka ee hadda jira, oo ku eg 27 -ka Ogosto, martidu waxay awoodi doonaan inay dhigtaan hal saac lacag la’aan garaashyada dadweynaha ee garoonka diyaaradaha; warqadda baarkinka waa in la keenaa miiska soo dhaweynta ee Xarunta Booqdaha si loo ansixiyo.
Xarunta Booqashada Fraport ayaa sidoo kale loo ballansan karaa inay tahay goob gaar u ah dhacdooyinka. Waxaa lagu qalabeeyay tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay ee soo bandhigidda, iyo panorama-ga madaarka oo hal-nooc ah ayaa ka dhigaysa meel ku habboon soo-saarka alaabada, shirarka jaraa'id iyo xafladaha qorrax-dhaca.